Biography na nchọpụta nke ọkà mmụta sayensị Jocelyn Bell Burnell | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ụwa nke sayensị, a na-enye ndị sayensị ndị ahụ onyinye dị ukwuu na-enye onyinye dị ukwuu n’ọganihu n’ọmụmụ ihe na ngalaba dị iche iche. Onwere ndị n’agbanyeghi na ha gbara ezigbo mbọ imeziwanye ihe ma nyekwa nnukwu aka na ngalaba sayensi, anaghị akwụghachi ha ụgwọ etu ha kwesiri. Nke a bụ ihe gbasara ndị Britain Jocelyn Bell Burnell kwuru. Enwere ọtụtụ ndị na-eche na, ma n'ime ma n'èzí ndị ọkà mmụta sayensị, e kwesịrị inye ya Nrite Nobel na 1974.
Gini mere eji nye onyinye Jocelyn Bell Burnell? Chọpụta na post a.
1 Jocelyn mgbịrịgba burnell
2 Akụkọ ndụ
3 Nchoputa nke Jocelyn Bell Burnell
4 Ọkachamara leghaara anya kpamkpam
Ọ bụ onye ọkà mmụta sayensị nke gụrụ akwụkwọ ma nwee ọganihu dị ukwuu site na nchọpụta nke pulsars. Akpọrọ Prọfesọ a na Mahadum Oxford ma ahọpụtara dị ka onye mmeri na-eto eto na ụdị isi physics. Onyinye a nyekwara ego ruru ihe ruru nde dọla atọ. Agbanyeghị, astrophysicist a enweghị ebumnuche ịchekwa ego ahụ. Kama nke ahụ, ị ​​ga-enye ego a iji kwado ụmụ nwanyị, ụmụ akwụkwọ gbara ọsọ ndụ na agbụrụ ndị pere mpe nke agbụrụ ka ha wee bụrụ ndị nyocha sayensị, ọkachasị n'ihe gbasara physics.
Mgbe ọ dị naanị afọ iri na abụọ, ọ chọrọ ịmụ ihe ọmụmụ physics ma rara onwe ya nye ya. Enweghị ike ịme nke a n'etiti 12s ka ụmụ nwanyị anaghị eme ihe ndị a na Northern Ireland. Maka ụmụ nwanyị naanị ị ga - amụta ọrụ dị ka isi nri na ịkpa akwa. Nwanyị a gụchara ọbá akwụkwọ sayensị niile nna ya nwere wee jisie ike mee ka onyeisi ụlọ akwụkwọ ha nabata ya na ụmụ agbọghọ abụọ. Naanị na ọkara afọ mbụ ọ marala ihe na klas niile.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike nwee nsogbu ntakịrị na-enwe ọganihu n'ọmụmụ gbasara ahụ, ọ bụ naanị nwanyị na Mahadum Glasgow. Oge ọ bụla ọ gbagoro n’egosi otu ọrụ, ọtụtụ n’ime ụmụ okoro ahụ ji ọkpọ na mkpu na-akwụsị ya. Ọ bụrụ na n'ihi ihe ndị a, ọ gbarụrụ, boos ndị ahụ na-aga n'ihu na-abawanye. Iji merie ọnọdụ ndị a, amụtara m oyi dị ka akpụrụ mmiri.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, a nabatara ya na Cambridge. Ọ bụ naanị otu nwa akwụkwọ ọzọ ya na Jocelyn nwere ụjọ na-atụ ụjọ ịhapụ ndebanye aha ya. N'ime afọ niile ọ nọ na mahadum a, ọ banyere na ngalaba redio astronomy. Prọfesọ Ọzụzụ ya nọ na-achọ ihe mara mma n’ụwa niile a na-akpọ quasars. A ghaghị ịchọ ihe ndị a maka iji ebili mmiri redio. Jocelyn mgbịrịgba burnell so na-ewu telescope ahụ bụ iji chọpụta ihe ndị a ma na-ahụ maka nyocha data enwetara.
Ọ nọ na-arụ ọrụ ruo ogologo oge ruo obere oge mgbe nke ahụ gasịrị, achọpụtara mgbaàmà nke abụọ. Mgbe e mesịrị, ha bụ ụfọdụ ihe ịrịba ama. Ke akpatre, ẹma ẹdifiọk ke mmọ ẹkedi usan eto. Igwe pulsar bu kpakpando nke ndi mmadu na-achoputa nke mbu Jocelyn Bell Burnell choputara.
Nchoputa nke Jocelyn Bell Burnell
Nchọpụta a E bipụtara ya n’afọ 1968 mgbe Jocelyn dị afọ iri abụọ na anọ ma bịanye aka na ebe nke abụọ na ederede na akwụkwọ akụkọ Nature. N'ajụjụ ọnụ ndị a ha mere, naanị ha jụrụ ya gbasara ndị enyi nwoke ọ nwere ma ọ bụ ụdị bra ọ nwere. Ma nke a enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na nchọpụta sayensị ya niile.
Achọpụtaghị ya na physics a rutere elu ya na 1974 mgbe ndị na-achọpụta pulsars nwetara onyinye Nobel na Physics - nwoke esoghị na ndepụta ahụ. Ọtụtụ ndị otu n’ime ndị sayensị a were ezigbo iwe ma nwekwaa ihe ihere ebe ọ bụ na enwetaghị onye sayensị a otuto naanị maka ịbụ nwanyị.
Otú ọ dị, nwanyị a ekpebisibeghị ike ịkwụsị, n'ụzọ dị iche. Echefuru aha ya ruo ọtụtụ afọ ruo mgbe Enweela ya onyinye pụrụ iche pụrụiche. Ọ bụ onyinye onyinye kachasị mma na ụwa sayensị niile. Ọ na-ekwu na ya emeela udo na nchefu echefuru e mere ya ma họrọ ịlụ ọgụ n'onwe ya. Ọ nọ na-achịkọta ego iji nyere ndị na-eto eto chọrọ ịmụ sayensị aka. Ọ bụ ụzọ ya si achọpụta ntụpọ dabara na Nrite Nobel ahụ.
Ọkachamara leghaara anya kpamkpam
Womenmụ nwanyị enweela nsogbu mgbe niile iji nwee ọganihu na sayensị, n'etiti ndị ọzọ. N'ụzọ dị mma, a na-achọpụtawanye na e nwere ìgwè dị iche iche n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ma ndị isi ma ndị otu nyocha. Nke a na-eme ka ndị otu nyocha na-agbasi ike, na-agbanwe ma na-aga nke ọma.
Otu n'ime ndị otu nwanyị kachasị pere mpe n'akụkọ ihe mere eme bụ na physics. Enwere ike ịsị na ha ebidola ịgụnye ndị nnọchi anya agbụrụ dị iche iche na ọ bụ ihe magburu onwe ya na ụmụ akwụkwọ gbara ọsọ ndụ nwere ike irite uru. Ma nke ahụ bụ otuto ndị Jocelyn Bell Burnell si nchoputa ya bụ nke ndị ọkà mmụta sayensị bụ Antony Hewish na Martin Ryle n’afọ 1974.
Dị ka nwa akwụkwọ na-eme nchọpụta, ọkà mmụta sayensị a na-enyekwa aka n'ịrụpụta telescope redio, nke bụ ihe mere ka a nwee ike ịchọta ụdị kpakpando ọhụrụ a nke ha kpọrọ pulsa. Na mgbakwunye, ọ bụ ya bụ onye chọpụtara na nyocha izizi nke radiations ndị a dị egwu na 1967. Iji mee nchọpụta a, ọ ga-ekwenye ndị nkuzi ya na ndị nlekọta ya bụ ndị mbụ nwere obi abụọ na nchọta ya. Nke a bụ n'ihi na a kwenyere na ọ bụ site na ntinye aka ma ọ bụ mmadụ n'onwe ya mepụtara akara ndị a.
Ka oge na-aga, a chọpụtara na ọ bụ ụdị ọhụụ ọhụụ ha kpọrọ 'pulsars'. Agbanyeghi na ihe ndia choputara bu nke onye oka mmuta Jocelyn Bell Burnell, eleghara ya anya kpamkpam mgbe ọ bịara inye ya Nobel Nrite na Sweden. Ọtụtụ mmadụ na-ele nke a anya dịka otu ikpe na-ezighị ezi kacha njọ e megoro na ndị mmeri Nobel Nrite.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere physics Jocelyn Bell Burnell.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Jocelyn mgbịrịgba burnell
Anya site n’uwa na onwa